Sidii gar gaar loo gaarsiin lahaa goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab oo laga shiray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Sidii gar gaar loo gaarsiin lahaa goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab oo laga shiray “SAWIRRO”
Kulan looga hadlayay sidii gar gaar loo gaar siiin lahaa goobaha dhawaan laga saaray kooxda Shabaab iyo xoojinta iskaashiga dhank milateriga ee ka dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa maanta ka dhacay xaruunta Wasaaradda difaaca ee magaalada Muqdisho.
Kulanka oo uu shir guddoominayay Wasiirka Gaashaandhigga mudane Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa waxa kaloo ka qeyb galay Wasiirka arrimaha gudaha mudane Cabdullaahi Goodax Barre, Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maman S. Sidikou iyo saraakiil kale oo ka kala tirsan talisyada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM.
Intii kulanka uu socday ayaa mas’uuliyiintan waxaa ay isla falaqeeyeen sidii loo heli lahaa wadiiqooyin sahlaya dedejinta mucaawino gar gaar ah oo la gaarsiiyo deegaanno badan oo kooxda Shabaab laga xoreyeey iyo sidii loo xoojin lahaa howlgalada ay iska kaashanayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegey in kan Wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin dowrka uga aadan xaqiijinta ammaanka goobaha laga xoreyeey argagixisada Al-Shabaab, ayadoo Wasaaradda arrimaha gudaha ay ku adadaalayso sidii ay u diyaarin lahayd qorshayaasha la xiriira sida mucaaniwada gar gaar ka ah loo gaarsiin karo gobollada dalka.
Mudooyinkii ugu dambeyeey waxaa soconayay dadaalo ku aadan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka kunool goobaha laga xoreeyey kooxda Shabaab, ayadoo haatan ay jiraan deegaanno badan oo mucaawinadaasi la gaarsiayay inkasta ay jirto meelo kale oo u baahan in kaalmo la gaarsiiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarkii ka dhacay Mandera